မော်စကိုတွင်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်တရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပန်းများပို့ခြင်း | အဖွဲ့အစည်း၏ငွေစာရင်းမှငွေပေးချေမှု
မော်စကိုတွင်ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်းဖြင့်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများသို့ပန်းများပို့ခြင်း။
ပန်းများကိုတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အမှာယူလိုပါတယ် မော်စကိုရှိဘဏ်အကောင့်မှငွေပေးချေမှုရသူတစ် ဦး လား။
မင်းပန်းတွေကိုအခုမှာယူချင်ပါတယ်လား? - ကိုယ့်အတွက်ပန်းစည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ မော်စကိုတွင် Floristum.ru, နှင့်အမိန့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်, "ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ငွေသားမဟုတ်သော" ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါအသေးစိတ်ကိုဖြည့်ပါနှင့်သဘောတူညီချက်ချက်ချင်းသင့်ရဲ့မေးလ်ထံသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ကြိုတင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရရန်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ပြီးကြိုတင်မှာယူလိုပါသလား။ - သင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးပါ။ corporate.floristum.ru/en သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုပါ - 8 800 600-54-97.
၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ပန်းစည်းများကိုအများသိရန်ကမ်းလှမ်းသည် ပန်းပွင့်များအတွက်စီးပွားဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှု တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများသည်။
နှင့်အလုပ်လုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ မော်စကိုတွင် Floristum.ru တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများသည်
ကန်ထရိုက်တစ်ခုပြီးသွားလျှင်ပန်းပွင့်များနှင့်လက်ဆောင်များကိုရုရှားရှိ Floristum.ru ရှိမည်သည့်မြို့မဆိုသင်မှာယူနိူင်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနေထိုင်သည့်ရာပေါင်းများစွာသောအခြေချနေထိုင်မှုများဖြစ်သည်။
LLC "FLN" (Floristum.ru) မှရိုးရှင်းသည့်အလိုအလျောက်ငွေတောင်းခံလွှာစနစ်သည်သင်၏ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအထိ၊ ပန်းစည်းပုံစံဖြင့်မှတဆင့်။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစာရေးရန်၊ ငွေတောင်းခံရန်နှင့်ခွင့်လွှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ စနစ်သည်သင်သတ်မှတ်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
အတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပန်းစည်းရရှိနိုင်ပါသည် Floristum.ru မော်စကိုမှာ!
မည်သည့်မြို့မှရုရှားရှိမည်သည့်မြို့သို့မဆိုအမှာစာပို့ပါ။ သင်လိုအပ်သမျှသည်မြို့ကိုသတ်မှတ်ရန်၊ သင့်တော်သောပန်းများကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်သတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Floristum.ru သည်ပန်းပွင့်ဆိုင်များနှင့်လက်ကားကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းစည်းများနှင့်ရေးစပ်သီကုံးမှုများပေးသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာစျေးဝယ်တဲ့အခါ, သင်ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းမှာပညာရှင်များထံမှကြီးစွာသောပန်းစည်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သေချာပါစေ။
စာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဆိုင် ၅၀၀၀ တွင်ပန်းများဝယ်ယူရန်အခွင့်အရေးရရှိသည်။ ဒီပေါ်တယ်မှာအရသာတိုင်းအတွက်ပန်းစည်းများစွာရွေးချယ်ထားပါတယ်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ဦး - တစ်သိန်းကျော်။ တဖန်သင်တို့ကသူတို့ကိုနှစ်ကလစ်အတွက်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုအဆင်ပြေစွာဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပြီးနောင်တွင်သူတို့သည်အမှာစာပုံစံသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
လိမ်လည်သူများနှင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများမှကာကွယ်ခြင်း။
အင်တာနက်မှတဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းတွင်လိမ်လည်သူများကိုလှည့်စားရန်နှင့်သင်၏ငွေကိုဖြုန်းတီးရန် (သို့) အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ Floristum.ru ပေါ်တယ်တွင်သုံးစွဲသူကာကွယ်သည့်စနစ်ရှိသည်။ သင်၏အမှာစာမပြီးမချင်းပန်းအလှဆုံးသူသည်ငွေကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်သောအလုပ်၏အရည်အသွေး၊ အခြေချနေထိုင်မှုလုံခြုံမှုနှင့်ဖောက်သည်အားပြန်အမ်းငွေ ၁၀၀% အာမခံချက်ကိုအာမခံသည်။
လုပ်ရတဲ့ - အခမဲ့ပိတ်ပွဲစာရွက်စာတမ်းများ။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများသည်သင့်စာရင်းကိုင်အားသတိပေးခြင်းမရှိဘဲအလိုအလျောက်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူမှုများအတွက်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, Scan ဖတ်, အစီရင်ခံစာများကိုစုဆောင်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ယခုသင်သည်သင်၏စာတိုက်လိပ်စာမူရင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးသင့်အီးမေးလ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
ဂန္ထဝင် mono ပန်းစည်း
အစိမ်းရောင်၊ ပစ္စတိုနှင့်ထုပ်ပိုးမှုများပါ ၀ င်သည့် minigerberas ၁၅ ခု၏အနီရောင်အကွက်ထဲတွင်ပန်းနှင့်ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း။
3050 XNUMX ₽ ပန်းစည်း "Red Gerberki" ပန်းစည်း
11790 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Alstroemeria - 19 pcs ။
ယာဉ်အတွက်အဖြူ alstroemeria နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းစည်း။
5776 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
နှင်းဆီ - 25 pcs ။
ဦး ထုပ် box ထဲမှာတောက်ပသောအဝါရောင်နှင်းဆီပန်း၏စတိုင်ပန်းစည်း။ ဤအံ့သြဖွယ်ပန်းစည်းသည်မည်သည့်အခါသမယသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အတွက်မဆိုအံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပန်းစည်းသည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
5896 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ဘုရ်ှသည်ထ - 15 pc ။
Single-ခေါင်းစဉ်နှင်းဆီ -9pcs ။
အနီရောင်ဂန္ထဝင်နှင်းဆီများနှင့်အတူပေါင်းစပ် Charm မှုန်ရေမွှားနှင်းဆီပန်း။
5090 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ပန်းပွင့်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ နှစ်နာရီမှပေးပို့ခြင်း ... အပြာရောင် Iris ၏ပန်းစည်းသည်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်နွေးထွေး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စိတ်ခံစားမှုကိုသာဖြစ်ပေါ်စေပြီးဟန်ဆောင်ဟန်လည်းမဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းနှင့်နွေ ဦး လန်းဆန်းမှုစသည်တို့ကိုပုံဖော်ထားသော Iris သည်လှပသောလူများစွာနှစ်သက်သောအချည်းနှီးမဟုတ်ပါ!
6576 XNUMX ₽ Iris ၏ပန်းစည်း
အားလုံးဂန္ mono ပန်းစည်းပြပါ
နေကြာ 7, buplerum 2, pinkum စမ်းရေ 4, chamomile 3, nigella အပြာရောင် 5, ammonium 2, limonium အဝါရောင် 3, salal 2/3, ယူကလစ်ပင် 1/2, သေတ္တာ - ကှကျ, ပို့စကတ်။
8710 XNUMX ₽ နေရောင်ခြည်၏ဖွဲ့စည်းမှု "နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအထုပ်"
Heart box 1 pc, ချုံပုတ်7pcs, ချောကလက်အက္ခရာများ5pcs
3350 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူ box ကို "Love Heart"
Peony 1 pcs Eustoma2pcs ခေါင်းခေါင်းတစ်လုံးတည်းနှင်းဆီ3pcs ရေမှုန်ရေမွှား3pcs Alstroemeria3pcs တစ်ခေါင်းခေါင်းတစ်ပန်းသေတ္တာ 1 pcs ယူကလစ်
3900 XNUMX ₽ Marshmallow နံနက်
Eustoma (Lisianthus, ဂျပန်နှင်းဆီ) - 1 pcs ။
Liatris - 1 pc ။
Hydrangea - 1 pc ။
Peony ထ - 1 pc ။
Single-ခေါင်းစဉ်နှင်းဆီ -3pcs ။
သေးငယ်တဲ့မင်းသမီးလေးနှင့်ကြီးမားသောနှစ် ဦး စလုံးအတွက်သင့်လျော်သော Mimic ဖွဲ့စည်းမှု,)))
3600 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Orchid Eustoma Alice နှင်းဆီတစ်လုံးတည်း Alstroemeria Eucalyptus
4400 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ဘုရ်ှသည်ထ - 21 pc ။
ငါတို့နှစ် ဦး နှစ် ဦး ထံမှပန်းပွင့်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုအာမခံပါသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖဲလေးဖြင့်အလှဆင်ထားသောစတိုင်နှင့်အဖြူရောင်သေတ္တာထဲတွင်အနီရောင်မှုတ်ဆေးနှင်းဆီပန်းများကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူနှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိပါစေ။
4559 XNUMX ₽ "ဖဲအံ့ဖွယ်"
Single-ခေါင်းစဉ်နှင်းဆီ - 101 pcs ။
မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့၊ သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းတစ်စည်းနဲ့ပြောပြပါ။ ထူးခြားသောအလှအပနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းစည်းသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်လူငယ်၊ ပန်းပွင့်များသည်လည်းစာနာမှုနှင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြမှုဖြစ်သည်။ ပန်းစည်းထဲတွင်ထည့်ထားသည့်ပတ်ထည် ၀ တ်စုံသေတ္တာသည်၎င်းကို ပို၍ ခေတ်မီ။ ၊ ထိုကဲ့သို့သောလက်ဆောင်ကိုကျိန်းသေတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်!
17680 XNUMX ₽ ပန်းရောင်အိပ်မက်များ
Tulip - 49 pcs
ဦး ထုပ် box ထဲမှာနေသာ 49 အဝါရောင် tulips ၏ပန်းစည်းသင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အများဆုံးနွေ ဦး နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင် Tulips များ၏အဖူးကြီးများသည်အရိပ်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပွင့်ချပ်များပေါ်တွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုများအားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေပြီးအတူတကွနွေးထွေးမှု၊
5848 XNUMX ₽ နေသာသောနံနက်။
ရောင်စုံကင်ညာနှင်းဆီ ၂၅ ခုပါသောတောင်းသည် Gift basket တွင်အလှဆင်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည်။
4750 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းများ (၂၅ နှင်းဆီ)
တောင်း၌အလှဆင်အစိမ်းရောင်နှင့်အတူရောင်စုံ freesias 25 ၏တောင်း။
7300 XNUMX ₽ ပန်းတစ်ပွင့်ပန်းပွင့် "Multicolored Freesia in basket"
အလှဆင်အစိမ်းရောင်နှင့်အတူ 15 ရောင်စုံ alstroemerias ခြင်းတောင်း။
5000 XNUMX ₽ ရောင်စုံ alstroemeria ၏တောင်း (19 pcs)
မျက်နက် 7, lisianthus 3, ချုံပုတ် 2, tulip 10, statice 1, အစိမ်းရောင်, တောင်း
6800 XNUMX ₽ နွေ ဦး ရာသီပန်းပွင့်များ "နွေ ဦး တောက်ပ"
ပန်းပွင့်များ၏တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်တောင်းခြင်း 19 pcs, alstroemeria 10 pcs, germini 18 pcs, မှုန်ရေမွှားနှင်းဆီ5pcs, iris 13 pcs, solidagi 10 pcs ။ လက်ဆောင်ခြင်းတောင်း၌အလှဆင်အစိမ်းရောင်နှင့်အတူ။
14850 XNUMX ₽ ပန်း၏ပန်းပွင့် "နေ၏ချိုင့်ဝှမ်း"
အလှဆင်စိမ်းလန်းစိုပြေသောရောင်စုံ tulips ၂၅ လုံးပါသောတောင်းပါရှိသည်။
5650 XNUMX ₽ ရောင်စုံ Tulips များဖြင့်ခြယ်သထားသော "Spring Kaleidoscope"
ရောင်စုံ Tulips ၁၈ ခုနှင့်အလှဆင်စိမ်းလန်းစိုပြေသောအပြာရောင်အိုင်ရူ ၁၇ လုံးပါရှိသည်။
5650 XNUMX ₽ "နွေ ဦး မတိုင်မီနာရီဝက်ခန့်" တွင် tulips နှင့် Iris များပါသည့်တောင်းပါ
Aqua နှင်းဆီပန်း ၅ ရောင်၊ ရေမှုန်ရေမွှား ၄ နှင်း၊
3050 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူခြင်းတောင်း "သေးငယ်တဲ့ချီးမွမ်း"
4950 XNUMX ₽ ပန်းပွင့်နှင့်သီးများပါသောသေတ္တာထဲတွင်ရေးစပ်ပုံ "Strawberry shine"
သီးနှင့်ခြင်းတောင်းခြင်း - စတော်ဘယ်ရီ ၅၀၀ ဂရမ်၊ ဘလူးဘယ်ရီ ၁၂၅ ဂရမ်၊ Raspberries ၁၂၅ ဂရမ်၊ စတော်ဘယ်ရီ ၁၂၅ ဂရမ်၊
8150 XNUMX ₽ "Macaroons နှင့်အတူ Berries Berries"
နာနတ်သီး ၁၊ အနီရောင်ပန်းသီး ၂၊ အစိမ်းရောင်ပန်းသီး ၂၊ အဝါရောင်ပန်းသီး ၂၊
5750 XNUMX ₽ အသီးအနှံတောင်းခြင်း "လတ်ဆတ်သောအသီး"
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 32 pcs ။
4620 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီ။
သီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနှလုံးပုံသဏ္boxာန်သေတ္တာ - စတော်ဘယ်ရီ ၅၀၀ ဂရမ်၊ Raspberries 500 ဂရမ်၊ ဘလူးဘယ်ရီ ၁၂၅ ဂရမ်၊ ဘလူးဘယ်ရီ ၁၂၅ ဂရမ်၊ Currant 125 ဂရမ်။
7450 XNUMX ₽ Heart Box "Berry Mix"
သစ်သီးဝလံခြင်း - ထိုင်းဖရဲသီး ၁၊ တော်ဝင်လိမ္မော် ၁၊ အဖြူရောင် pitahaya ၁၊ အဝါရောင်ပုလွေဟိုင် ၂၊ kaffir ထုံး ၁၊ ကော့တေးငယ်ငယ်အုန်း ၁၊ မတူညီသောသရက်သီး ၄ မျိုး၊ ကာဘိုလာ ၄၊ နာနတ်သီး ၁၊ kiwi ပရီမီယံရွှေ ၃၊ mangosteen 1၊ သင်္ဘောသီး ၁၊ ရမ်ဘူတန် ၁၀၊ မြေး ၃၊ ပုံမှန်အုန်း ၁၊ ရူပဗေဒအထုပ် ၁ - အပြင်ထူးခြားဆန်းပြားသော Vanda 1 သစ်ခွများ၊ cymbidium သစ်ခွ 1၊ dendrobium orchid2နှင့်အတူ။
39750 XNUMX ₽ ထူးခြားဆန်းပြားသောသစ်သီးနှင့်သစ်ခွပန်းခြံများ "ပရဒိသုဖူးခက်"
စတော်ဘယ်ရီ 1250 ဂရမ်။ , ဘလူးဘယ်ရီ 500 ဂရမ်, ဘလက်ဘယ်ရီ 500 ဂရမ်။ , Currant 250 ဂရမ်, Raspberry 375 ဂရမ်။ , Peony6pcs ။ , Chamomile9pcs ။ , Pistachio, ဖဲကြိုးများ, တောင်း။
19750 XNUMX ₽ သီးများနှင့်ပန်းများနှင့်အတူခြင်းတောင်း "စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့!"
avocado 7, kiwi 2, rose 7, chrysanthemum 3, lagurus 1 စည်း, ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး 15, ယူကလစ် 1 pack ကို, pistachio 3, box 1
8250 XNUMX ₽ ဖွဲ့စည်းပုံ "ထောပတ်သီး"
ပန်းပွင့်ရှိလက်ဖက်ရည်၊ ဘီစကစ်တန့်၊ Lindt ချောကလက်တို့တွင်အပြာရောင် - မုန့်ချိုင့်များ၊ ခရမ်းရောင် freesias၊ lisianthus၊ အဖြူ alstroemeria၊
9350 XNUMX ₽ ပန်းပွင့်၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်သကြားလုံးများရှိခြင်းတောင်း "Matre"
နှင်းဆီ ၆၁ ပွင့်၊ အရောင်တောက်ပသောပန်းအိုးများ၊ စတော်ဘယ်ရီ ၁၀၀၀ ဂရမ်၊ Raspberries ၂၅၀ ဂရမ်၊ Blueberries ၂၅၀ ဂရမ်၊ Currant ၂၅၀ ဂရမ်၊ Blackberries ၂၅၀ ဂရမ်
28250 XNUMX ₽ လက်ဆောင်သေတ္တာ "Sangria"
လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သော lilac သေတ္တာအတွင်းလက်ဖက်၊ ချောကလက်၊ ချောကလက်နှင့်ကြွေခွက်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးပါ
3390 XNUMX ₽ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်စဉ် ၂၈၆
2350 XNUMX ₽ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်စဉ် ၂၈၆
4690 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4950 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4350 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4050 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
သကြားလုံးများနှင့် pastries အားလုံးကိုပြပါ
ဒီဇိုင်နာ kraft စက္ကူတွင်တင်သွင်းထားသော peonies ၂၇ ခုပါ ၀ င်သည်။
14100 XNUMX ₽ peonies ၏ပန်းစည်း "မေ"
လက်ဆောင်သေတ္တာထဲမှအလှဆင်စိမ်းလန်းစိုပြည်သောအဖြူရောင် tulips ၁၂ လုံးနှင့်အပြာရောင် Iris ၁၃ လုံးပါ ၀ င်သည့်ပန်းစည်း။
3650 XNUMX ₽ အဖြူရောင် tulips နှင့်အပြာရောင် Iris ၏ပန်းစည်းမုန့်နှင့်အတူဘလူးဘယ်ရီ
နှင်းဆီ - 50 pcs ။
Ruscus - 50 pcs
ဘုရ်ှသည်ထ - 51 pc ။
ခြင်းတောင်း - 1 pc ။
နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်သည်မွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည် (သို့) မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်သာယာသောအဖြည့်ခံဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့လက်ဆောင်သည်သင်၏အချစ်ရေးခံစားချက်များကို ဖော်ပြ၍ အချစ်ရေးနေ့နှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်မည်။ သင်၏ချစ်ရသူအားအရသာရှိသောနှင်းဆီပန်းလတ်ဆတ်သောခြင်းတောင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်ပါ။
29188 XNUMX ₽ ကြီးမားသောနှင်းဆီပန်းခြင်းတောင်း
အဖြူရောင် tulips 101 ပန်းစည်း!
14232 XNUMX ₽ အဖြူရောင် tulips 101 ပန်းစည်း
Aqua နှင်းဆီ ၁၀ ပွင့်၊ ပန်းရောင် Peonies ၉ ခု၊ ပန်းတစ်ပွင့်ရှိပန်းတစ်ပွင့်၊ လက်ဆောင်သေတ္တာထဲမှာဝါဂွမ်း ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည်။
8700 XNUMX ₽ ပန်း၏ပန်းစည်း "Agnessa"
အစိမ်းရောင်နှင့်အတူဂန္ Raspberry 15 နှင့်ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်း၏တောက်ပသော mono-букет။
5775 XNUMX ₽ 15 နှင်းဆီပန်းပန်းစည်း Raspberry ပန်းရောင်
3700 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
25 နှင်းဆီပန်း 70 စင်တီမီတာပန်းစည်း။
4300 XNUMX ₽ ပရီမီယံအဖြူရောင်နှင်းဆီပန်း